पाठेघर क्यान्सर भएकी श्रीमतीलाई बचाउन राती ३ बजेदेखि भारी बोक्छन् दिलबहादुर ! एक सेयर गर्दिनु होला ! – Aaj ko Sandesh
यसरि कुरा गरिरहेकै बेला मोबाइल फोन वि स्फोट हुँदा एक १४ वर्षीया किशोरीको मृ’त्यु(क्यामरा मा कैद भिडियो हेर्नुहोस)
पाथिभरा माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन, फाल्गुन १७ गते सोमबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
मुख्य पृष्ठ /News/पाठेघर क्यान्सर भएकी श्रीमतीलाई बचाउन राती ३ बजेदेखि भारी बोक्छन् दिलबहादुर ! एक सेयर गर्दिनु होला !
पाठेघर क्यान्सर भएकी श्रीमतीलाई बचाउन राती ३ बजेदेखि भारी बोक्छन् दिलबहादुर ! एक सेयर गर्दिनु होला !
प्युठान जिल्ला गौमुखी गाँउपालिका वडा नं ३ बस्ने ३९ वर्षिया अम्मी सुनार पाठेघरको मुखको क्यान्सरका कारण थलिएको एक वर्ष भइसक्यो । तर उपचारका लागि आर्थिक अभाव भएको भन्दै उनले सहयोगको याचना गरेकी छिन् । गाउँमा सानो झुपडी र पाखो वारी मात्र छ, बिरामी भएयता त्यही जग्गा बेच्न खोजेको थिएँ, कसैले किन्न मान्दैनन् अम्मीका श्रीमान दिल बहादुर सुनारले दु:ख पोखेका छन् ।
श्रीमतीको उपचारका लागि काठमाडौँ आएको एक वर्ष हुन थाल्यो । एक वर्षसम्म अस्पतालमा निकै खर्च भयो । गाउँमा खेतिपाती गरेर जिविकोपार्जन गर्दै आएका दिलबहादुर यतिबेला श्रीमतीको उपचारका लागि राजधानीमा छन् । उता ८२ वर्षिया बृद्ध आमाको स्याहार गर्ने कोही छैन, यता रोगी श्रीमती पनि सम्हाल्नु पर्यो ।आफुु निकै संकटबाट गुज्रिएको उनले बताएका छन् । उता घर कसले सम्हाल्यो होला, केटा–केटीले के खाए होलान उनले पीडा सुनाएका छन् ।
श्रीमतीको उपचारका लागि पैसा जुटाउन नसके पछि दिल बहादुरले कालीमाटी तरकारी बजारमा राती तीन वजेदेखि भारी बोकेर पैसाको जोहो गरिरहेका छन् । भारी बाेकेको पैसाले कोठा भाडा तिर्न मात्र ठिक्क हुन्छ, उपचार के ले गर्ने ? दिल बहादुरले निधारको पसिना पुछ्दै आफ्नो बिवशता सुनाएका छन् । रोग पहिचान भए यता कम्तीमा ८ लाख रुपैँया रकम खर्च भएको उनले बताएका छन् । अहिलेसम्म ऋणको भरमा उपचार भइरहेको छ, अब त रिण पनि कसैले दिँदैनन्, बाँकी ऋण पनि कसरी तिर्ने उनले दु*खेसो पोखेका छन् ।
अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी १,११२ ले ‘जिते’ कोरोना
सडकपेटीमा को’रोना संक्रमित ! भन्छन- पैसा लिएर आउँछु भनेको थिएँ, रोग बोेकेर घर जान सकिनँ (हेर्नुहोस भिडियो)
चीनसँगको झ’ड#पमा भा’रतीय सै’नि’कका मे’ज’रको मृ¥त्यु पछि म’च्चि’यो; यस्तो ब;बा’ल…..
नेपाल टेलिकमको निशुःल्क 1500MB डेटाको मजा” यसरी लिनुहोस्